Teokrasia - Wikipedia
Ny teokrasia dia fitondram-panjakana mahazo fahefana avy amin'ny andriamanitra na amin'Andriamanitra. Amin'izany dia Andriamanitra tenany na ilay andriamanitra, na ny fahatongavany ho nofo, na ny solontenany, na ny mpitondra fivavahana no tompon'ny fahefana. Araka ny hevitr'i Flavio Josefa, ao amin'ny atao hoe teokrasia dia Andriamanitra mihitsy no mitondra ka tsy tokony hisahirana amin'ny politika ny mpino. I Mosesy no nitondra ny vahoaka nefa Andriamanitra no manjaka ary ny teniny no lalàna. 
Tamin'ny taonjato faha-19 ny teny hoe teokrasia dia matetika nampiasaina hiresahana ireo fitondrana ara-politika miorina amina foto-kevitra ara-pivavahana na tantanana mpitondra fivavahana. Ampiasaina indrindra io teny io amin'izao hanondroana ny fifangaroan'ny politika sy ny fivavahana ka ny Fiangonana no tompon'ny fahefam-panjakana.
Ilay mpanavao fiangonana Jean Calvin tamin'ny taonjato faha-15 sy ilay olom-panjakana sady miaramila atao hoe Olivier Cromwell tamin'ny taonjato faha-16 dia nanandrana hametraka fitondrana teokratika.
Avy amin'ny teny grika hoe θεοκρατία / theokratia, izay midika ara-bakiteny hoe "fitondran'Andriamanitra" na "fanapahan'Andriamanitra", ny hoe teokrasia. Fikambanan'ny anarana hoe θεός / theos "andriamanitra" sy ny matoanteny hoe κρατέω / krateo "mitondra" na "manapaka" ny hoe θεοκρατία.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Teokrasia&oldid=874868"
Dernière modification le 28 Aogositra 2018, à 21:25
Voaova farany tamin'ny 28 Aogositra 2018 amin'ny 21:25 ity pejy ity.